Ny namako, fitahiana lehibe ho ahy! - Le blog de midera
Ny namako, fitahiana lehibe ho ahy!
Publié le 31 mars 2008 par midera
...Efa ho roa taona sahady izay no nahatongavanay eto Canada.Mandeha ny fotoana, tsy hitahita akory ny fiazakazahany. Raha tamin'ny taona voalohany nahatongavana teto dia toa noheveriko tsy azoko inoana mihintsy izany ho tamana eto izany.Tsy haiko na maro loatra ny olona , sy fomba fiainana namatotra anay tany Suisse ka ny vatanay ihany no teto fa ny saina sy ny fo dia tsy afaka tany mihintsy.
Mbola tsy sahy miteny aho izao hoe efa tamana tanteraka fa efa afaka miteny kosa hoe efa manomboka miraiki-po amin'ny namana vitsivitsy eto, izay anisany manampy ahy be hanadinoako tsikelikely ny fiainana teo aloha.
Amiko ny namana tena " fitahiana " lehibe tsy voavidim-bola aman-karena mihintsy , ary matetika na dia ny havana akaiky aza tsy mahavita ny vitan'ireny namana ireny.
Misaotra an'Andriamanitra be mihintsy aho nomeny namana eto , ny namana taloha rehetra any amin'ny toerana hafa moa ( Suisse, Frantsa, Madagascar, Londres...)dia tsy lazaiko intsony satria efa raiki-tapisaka ato ampoko ireny ka tsy ho adinoko velively, fa ny namana tiako lazaina eto dia ny namana vaovao vao nomen'i Tompo ahy , na anay mianakavy kely taty aoriana.
Tamin'ny fotoana mangidy indrindra nandalovanay teto, dia ny namoizanay ny dadaben'i Amboara, dia tena hitako nanampy anay be mihintsy ny fananana ireny namana ireny, nitondra am-bavaka, nanampy tamin'ny fomba maro samihafa.
Ny amin'ny fotoana hafa mahafinaritra rehetra indray moa dia tsy lazaina intsony, ny hatsaran'ny manana "tena namana" , fahasoavan-dehibe ....
Maniry mafy aho ny haharetan'izany fifankatiavana izany mandrakizay.Ka ny vavaka ataoko dia ny mangataka amin'i Tompo mba hiaro izany amin'ny asan'ilay ratsy mpisompatra. Ho vavolombelon'i Jesosy amin'ny fitiavana ety ambonin'ny tany, ho jiro fanazavana ny manodidina, ho fanatanterahana ilay didy masina hoe:
"tiava ny namanao tahaka ny tenanao...." sy ny hoe " izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatro hianareo raha mifankatia"
Misaotra anareo namana tamin'ny fitiavana nasehonareo, tamin'ny nandraisanareo anay tamin'ny fo tsotra, tamin'ny vitanareo rehetra taminay, tamin'ny famelanareo izay mety ho tsy mety nataonay.
Tena harena sarobidy aminay koa hianareo!
« mon rédempteur vit! Merci à Tati Boux »